बिरामीको जीवनमाथि मनमोहन अस्पतालको खेलबाडः पत्थरीको अप्रेशन गर्दा मिर्गौला निकालियो !
ARCHIVE, NEWSPAPER » बिरामीको जीवनमाथि मनमोहन अस्पतालको खेलबाडः पत्थरीको अप्रेशन गर्दा मिर्गौला निकालियो !
मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमा पत्थरीको अप्रेसन गर्न आएका एक बिरामीको मिर्गौला निकालिएको छ । नुवाकोट विदुर नगरपालिका–१२ का ३२ वर्षीय शिवप्रसाद रिमालको मिर्गौला झिकिएको हो ।
नुवाकोट विदुर नगरपालिका–१२ का ३२ वर्षीय शिवप्रसाद रिमाल मिर्गौला निकालेको तत्काल जानकारी अस्पताल प्रशासनले पत्थरीको अप्रेसन गर्दा मिर्गौला फुटेकाले निकालेको पीडित परिवारलाई जानकारी दिएको दाबी गरेको छ । तर, पीडित परिवार भने मिर्गौला निकालिएपछि मात्रै जानकारी दिएको बताउँछ ।
अस्पताल प्रशासनले पीडित पक्षलाई भित्र बोलाई दबाब र धम्कीका भरमा ६ बुँदे सम्झौता गर्न लगाएको आफन्तको आरोप छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।